Raha manana iPad ianao dia afaka mampiasa Adobe Photoshop CC miaraka amin'ireo rakitra PSD | Famoronana an-tserasera
Adobe Photoshop CC dia efa akaiky ny iPad
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, maro
Eny tsy ho ela afaka mampiasa Adobe Photoshop CC amin'ny iPad-nao ianao. Izany hoe, azonao atao ny manokatra fisie PSD amin'ny iPad raha tsy mankany amin'ny solosainao finday na PC-nao, mba hidiranao amin'ireo fitaovana mitovy amin'ny mety anananao amin'ireo fitaovana roa ireo.
Vaovao be izany efa nambara tao amin'ny Adobe MAX 2018 ary izy io dia hitondra ilay programa ho an'ny solosaina ao anaty fitaovana mora entina toa an'i Apple. Ary eny, io no programa feno.
Injeniera Photoshop roa izay Nanapa-kevitra ny hanandrana Photoshop amin'ny iPad izy ireo miaraka amin'ny kaody Photoshop. Ny ekipa mpamorona no tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny endrik'ity vokatra ity, ary afaka volana vitsivitsy dia vonona ny handefa azy ireo izy ireo.
Rehefa mampiasa Photoshop ho an'ny iPad ny kaody mitovy amin'ilay kinova desktop, tsy misy fanatontosana na valiny hoesorina. Ny fitaovana rehetra dia ho eo miaraka amin'ny sivan'izy ireo, hiasa miaraka amin'ny sosona sy ireo safidinay ary ireo fanitsiana efa nahazatra antsika.
Ho zavatra rehetra dingana lehibe ho an'ny mpampiasa iPad, satria tsy mila mifindra amin'ny rindranasa hafa hafa izy ireo, toy ny Photoshop Mix sy Photoshop Fix hahafahana manao asa hafa.
Ny maha samy hafa ny kinova desktop sy ny iPad dia mitoetra ao amin'ny traikefan'ny mpampiasa ao amin'ny interface interfacesatria hamboarina ho efijery mikasika. Amin'ny fahafahanao mampiasa ny efijery mikasika an'io rakitra PSD io dia handeha ho any amin'ny rahona ianao mba hahafahanao manohy manisy fanovana avy amin'ny birao raha tianao.
Photoshop ho an'ny iPad dia hijoro irery na ho mpiara-miasa Photoshop eo amin'ny birao. Tsy fantatray ny vidiny, saingy fantatray fa amin'ny andiany voalohany dia hiseho mihena ny toetrany ka ampidirina miandalana amin'ny fanavaozana izy ireo. Tsy fantatsika ihany koa ny fotoana hamoahana azy io, koa zahao maso ny bokintsika.
Andro tsara ho an'ny Adobe toy ny niaraka tamin'i Acrobat izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe Photoshop CC dia efa akaiky ny iPad
Adobe namoaka Premiere Rush CC Video App
Manavao ny ampingany ny FC Barcelona